တင်ဒါအပေါ်ငွေရှာဖို့ဘယ်လို - နုနှင့်မည်သို့ထွက်ယူသွားတတ်၏ကဘာလဲ?
အဆိုပါအစပြုသူလေလံဆွဲခြင်းနှင့်အနိုင်ရဖို့ဘယ်လို - နူးညံ့သောကဘာလဲ?
ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ကြောင်းအတော်များများကကုမ္ပဏီများ, နုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါ။ သူကလူတိုငျးအတှကျမြင်သာထင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆောင်တတ်၏။ နုမှတဆင့်ဖောက်သည်ကုန်ပစ္စည်းများ / န်ဆောင်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းများ၏အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်ကြီးတွေစာချုပ်ခံယူခြင်းနှင့်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်အနိုင်ရတဲ့၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အဆိုတော်များ။
တင်ဒါ - ကဘာလဲ?
တစ်ဦးနူးညံ့ကျင်းပရန်ပြည်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကိုအမြဲအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် - ကိုအကောင်းဆုံးသဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေ။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းများတွင်သတ်မှတ်ထားသောပါဝင်သည်ပြဌာန်းချက်၏အခြေခံ:
ကယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါသည် - နုနှင့်မည်သို့ထွက်ယူသွားတတ်၏ကဘာလဲ။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပါဝင်သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဖောက်သည်ပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီများအကြားကိုသူ့အဘို့တစ်ခုစံပြ option ကိုရွေးပါ။ အဆိုပါဖောင်းပွခြင်းမရှိစိတ်ဝင်စား။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လူအပေါင်းတို့အားပွင့်လင်းခြင်း, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကျိုးကြမယ်ဆိုရင်များ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်တိုင်ကကြောင့်တရားဝင်အပြစ်ပေးရပါမည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာပြုလုပ်နှိပ်စက်တာ ကုမ္ပဏီရဲ့ပုံရိပ်ကို ။
ဘယ်လိုတင်ဒါတွင်ပါဝင်မှအရာအားလုံးကိုမသိရပါဘူး။ ဒါဟာပြိုင်ပွဲသင့်လျော်ပါသို့မဟုတ်အဆိုပြုထားကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကြောင်းသည်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ နုခွဲခြားထားတဲ့အများအပြားအမျိုးအစားများရှိပါတယ်:
အဆောက်အဦးအပြင်။ ဒီမျိုးစိတ်များ၏ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်ကလုံးဝပွင့်လင်းသည်နှင့်ကျန်းမာယှဉ်ပြိုင်မှုလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများအတွက်တစ်ဦးကရှာဖွေရေး။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားသူသည်လုံးဝလူတိုင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အားဆွဲဆောင်ရန်မီဒီယာသတိပေးတို့အားဤသို့သောတင်ဒါ၏အစ။
ပိတ်ထားသော။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကိုယ်နှိုက်များအတွက်ပြော၏။ တိကျတဲ့ထုတ်ကုန်ကယ်တင်တတ်၏အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်၏စက်ဝိုင်းအလွန်ကန့်သတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လက်နက်။
ရွေးချယ်တင်ဒါရွေးချယ်ရေးနှစ်ခုအဆင့်ဆင့်ထားရှိရေး။ ပုံစံတင်ပို့ရန်ပြီးနောက်ရှာဖွေရေးစံလေလံအချင်းချင်းရွေးချယ်ထားသည်။ အဆုံး၌, သူတို့ရဲ့အရေအတွက်ကခုနစ်ခုထက်မပိုပါဘူး။ တစ်ဦးရွေးချယ်ရွေးချယ်ရေးလွန်ကြသူပေးသွင်းတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ခုအဆင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စျေးကွက်ဟာယပူဇော်သက္ကာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ကနဦးအဆင့်မှာ, အားလုံးလေလံဖောက်သည်အလုပ်ထုတ်ပေးသူတို့နှင့်အတူညှိနှိုင်း။ အလုပ်အလုပ်နှုန်းထားများဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်တိုးတက်အောင်, အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့အဆိုပြုချက်နောက်ထပ်, တညျ့ချို့ယွင်းချက်နှင့်အတူဆက်လက်။
မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်တော်မူပြိုင်ဆိုင်မှုသိသိသာသာကအနိုင်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွားစေပါသည်။ Search ကိုတင်ဒါအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဆိုပြုချက်အဖြစ်တာအဖြစ်ရှုမြင်, အခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အတိအကျအဘယ်အရာကိုတစ်ဦးနူးညံ့နားလည်ရန်အဓိကအရာ။ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအင်တာနက်ပေါ်ရှိဖြစ်နိုငျသညျ, လေလံအမျိုးမျိုးကိုရှာပါ။ လူကြိုက်အများဆုံးအီလက်ထရောနစ်တင်ဒါဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစိုးရထိန်းချုပ်ထားရာ, အထူးက်ဘ်ဆိုက်များမှာကျင်းပနေကြပါတယ်။ လိုအပ်သောလယ်ယာက၎င်း၏ရှာဖွေရေးအတွက်ကိုသင်ဂရုတစိုက်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဆနျးစစျသငျ့သညျ။
unified သတင်းအချက်အလက်ဝယ်ယူရေးစနစ်ကပြိုင်ပွဲအရေအတွက်များတဲ့နေရာ။ အခြေအနေအသင့်လျော်ဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းများနှင့်အောင်သေချာစက်မှုလုပ်ငန်း Selected, သင်သတ်မှတ်ရက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ လျှောက်လွှာဂရုတစိုက်စျေးနှုန်းမူဝါဒသည်လေ့လာနေဆဲဖြစ်နိုင်လျှင်။ အဆိုပါခြေလှမ်းများရိုးရှင်းပြီးသူတို့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူအားလုံးသင်တန်းသားများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးနူးညံ့အစပြုသူအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနည်း အနည်းငယ်အကြံပေးချက်များရှိပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းသောစျေးနှုန်း - အောင်ခြင်းများအတွက်လိုအပ်ချက်အစုတခု။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်ကြောင်းစျေးကွက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာအီလက်ထရောနစ်-ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်သည်။ ၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကြောင့်သင့်ရဲ့ဒေတာများနှင့်အဝေးမှစာရွက်စာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်အတူတစ်ဦးက USB flash drive ကိုဖြစ်ပါသည်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ညီမျှသည်။ အဘယ်အရာကိုရိုးရိုးသားသားနူးညံ့၏တစ်ဦးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်မှုများနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကုမ္ပဏီအထဲတွင်စိတျအပိုငျးကြာ - ကထက်ဝက်စစ်တိုက်ပါတယ်။
လက်မှတ်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်နောက်ခြေလှမ်းမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ ဒါဟာနိုင်နှင့်တိကျစွာလယ်ကွင်းထုတ်ဖြည့်အဖြစ်သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူပူးတွဲအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်လွှာများထည့်သွင်းစဉ်းစားတွေအကြောင်း2ရက်ကြာပါတယ်။ ကတင်ဒါပါဝင်မှုများအတွက်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်။ ပါဝင်မှုအထုပ်အဘို့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများလည်းပါဝင်သည်:
မှတ်ပုံတင်ဖို့ attesting လက်မှတ်;
ပြီးခဲ့သည့်ခြေလှမ်းတခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ပြီးစီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ပါဝင်မှုပေးဆောင်လျှင်, ပိုက်ဆံကနေ debited လိမ့်မည်။ တူညီတင်ဒါအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ရန်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများအများအားဖြင့်တစ်ဦးအထုပ်။
ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရိုးရှင်းဖြစ်ကြပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုံးဝပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားနှစ်ဦးစလုံးအားလုံးလှုပ်ရှားမှုများ, သူတို့ရဲ့လက်ကြိုးစားရန်ခွင့်ပြုသည်။ တစ်ခုက IP တင်ဒါအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်သလား? အဖြေဖြစ်ပါသည် - ဟုတ်ကဲ့! သူတို့က, အအခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်တူညီသောအခြေအနေများဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အခိုက်သည်အထိနူးညံ့လျှို့ဝှက်ထား, နှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်မဆက်သွယ်ကြဘူးအချင်းချင်းများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်ဖောက်သည်များ၏ရိုးသားမှုအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသံသယအမြဲကြိုတင်နုမှဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်၎င်း၏တိကျတဲ့အထဲကရှာတွေ့မှ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ။
အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါသည် - ကျွမ်းကျင်သူများကနုပေါ်လေလံအတွေ့အကြုံကိုပြောကြပါတယ်။ Beginners အဆိုပါအသေးစားပြိုင်ပွဲနှင့်အတူစတင်တဖြည်းဖြည်းကြီးမားတင်ဒါတွင်ပါဝင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အကြံပြု:
သငျသညျ soberly နှင့်လက်တွေ့ကျကျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းရည်တွက်ချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအများအပြားဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၏လေလံအားလုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီနု၏အခွအေနဖြည့်ဆည်းဖို့အာဏာကိုမဆုံးရှုံး။
နုအသိပေးစာ၏ဆုရှင်, ထိုလေလံပွဲအနိုင်ရမှပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း - ကသှေးကဒ်ကုမ္ပဏီတွေဟာတောင်းဆိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်ဆောင်ရွက်လတံ့သောလျှောက်လွှာပုံစံ, ပြုစုသည်။ ကိုယ်ကသာဖောက်သည်ကဆိုပါတယ်သောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးများကိုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ နုညံ့ဖျင်း application ကိုယှဉ်ပြိုင်ရဲ့ start ရှေ့တော်၌ထိုသင်တန်းသားများကိုဖယ်ရှားစေသည်အထိချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုအစီအစဉ်, လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။
မှတ်ချက်ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်ပါရန်မက်လုံးပေးအာမခံပါသည်။ အာမခံခြင်းမရှိဘဲ Applications ကိုအချို့သောတင်ဒါကော်မတီများပင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး။
လိုအပ်ပါကစျေးကွက်ကိုတွေ့သောအခါ, ကစာရွက်စာတမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏မှတ်ပုံတင်ငှါ, ထောက်ပံ့ရေး၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်သူသည်ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများမှတင်ဆက်သောဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့တင်ဒါကော်မရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါတင်ဒါအပေါ်ပြန်ကြားရေးအထူးပြုက်ဘ်ဆိုက်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအခုမှစကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှဖွင့်နိုင်ပြီးအောင်ခြင်းပါတီများအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများဖန်တီးပေးရန်ရည်ရွယ်သည့်ဝန်ဆောင်မှု "တင်ဒါထောက်ခံမှု 'အမိန့်မှတစ်ဦးသက်သေပြချက်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူစတင်ရန်အကြံပြုသည်။
အောင်ပွဲ၏အမှု၌, ကုမ္ပဏီအမိန့်ခန့်မှန်းထားသည်။ ဒါကအဓိကအများပြည်သူနူးညံ့သည်ဆိုပါက, တကကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းရလိမ့်မည်။ အောင်ပွဲလည်း၎င်း၏ထုတ်ကုန်ပန်းကန်ဝယ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအမိန့်မှမည်ဟုကုမ္ပဏီ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ တင်ဒါများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလားအလာဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ပါဝင်မှုသိသိသာသာဝင်ငွေတစ်ခုခုကုမ္ပဏီဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
Benchmark - အမျိုးအစားများ, အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို
Hybrid ကိုလက်ဖက်ရည် "မော်နီကာ" ထ
နံရံများကိုအဘို့အ 3d ဝါးပြား
ပင်ပန်းနွမ်းနယ် - ဘာလုပ်သနည်း
ပြင်းစွာတိုက်သားအိမ် cyst - လက္ခဏာများ
ဆော်လမွန်ငါးနှင့်မုန့်ငံပြာရည်နှင့်အတူခေါက်ဆွဲ - အနီရောင်ငါးနှင့်မုန့်နှင့်အတူ spaghetti ၏အရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
သခွားသီး၏အကောင်းဆုံးအမျိုးပေါင်း - အိမ်မှာမွေးမြူ၏အဘယျသို့အမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်သနည်း
Chrysanthemum အခန်းထဲမှာ - စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အကြံပေးချက်များ